Thwebula KakaoTalk 2.5.2.1427 – Windows – Vessoft
Chat, Ukukhulumisana Voice
KakaoTalk – a software for communication emhlabeni wonke nabangani. KakaoTalk ikuvumela ukuba bashintshisane imiyalezo futhi wenze amakholi wefoni noma amakholi group. Isofthiwe kwenza ukuthumela amafayela omsindo noma ividiyo, izithombe kanye imibhalo ehlukahlukene ezinobukhulu ezinkulu. KakaoTalk isekela ukuvumelanisa ohlwini contact kanye izilungiselelo software phakathi idivayisi yakho nekhompyutha. Isofthiwe iqukethe mode lock yisivikelo to the izingxoxo iphasiwedi. KakaoTalk futhi kwenza ukuba Ukutjhugulula ifonti ye umbhalo futhi ngezifiso isitayela noma obala ibhokisi lengxoxo.
Imiyalezo futhi ifayela exchange
Izingcingo Personal and group
Kuvikela lengxoxo iphasiwedi
Amazwana on KakaoTalk:
KakaoTalk Ahlobene software:
English, Українська, 中文, Русский... ImgBurn 2.5.8.0
Akwazi ukugcina Ithuluzi Elula ukusebenza nge disk images. Isofthiwe isekela ethandwa takhiwo image futhi likuvumela ukudala izithombe noma ushise kubo a disc.